Archive du 20161114
Baomba teny Mahamasina Hafenina ny tena marina
Nitsingerina omaly ny 13 novambra nisian�ny asa fampihorohoroana mahatsiravina tany Parisy, izay nahafatesana olona 130 sy naharatrana 413 nandritra ny fampisehoan�ny tarika Amerikanina Eagles of Death Metal tao Bataclan sy tamina toerana 4 hafa.
Gaby Vakiniadiana Miantso fahatongavan-tsain�ny tsirairay
Lesona goavana no azo tsoahana tamin�ny tenin�ny filoham-pirenena amerikanina vaovao, hoy i Gaby Vakiniadiana, izay mpanao politika sady sekretera jeneralin�ny antoko Vahoaka Miray na VAMI, izay ao anatin�ilay vondron�ny mpanohitra rodoben�ny vahoaka tia tanindrazana ho amin�ny fanorenana ifotony (RMTF).
Taratasin�i Jean Hidororororo ve e !
Miarahaba anao aho Jean ! Toa arakaraka ny itenenana anareo ity no toa vao mainka mampitrifana anareo a ! Sa hoe mitenena eo foana fa raha mihaino koa ny vato dia maheno anareo e !
Famarotana tany amin�ny vahiny Tena famonoan-tena, hoy ny SIF
Tsy nihafahafa ny fomba filazan�ny avy eo anivon�ilay sampana iombonana ho an�ny fananantany na ny (SIF),
Mifandray tendro �
Fomban�ny mpitondra ankehitriny ny mifampiaro amin�ny tsy mety ataony.
Kaominin�i Betafo Mirongatra ny asan-dahalo
Mirongatra ny asan-dahalo any amin�ny kaominina ambonivohitr�i Betafo, distrikan�i Betafo. Ankoatra ny lahatr�omby dia nambaran�ny Ben�ny tan�na Rakotonarivo Ramanoarivelo fa ripaka avokoa izay rehetra ren�ireo mpanao ratsy fa manam-bola ao an-trano ankoatra ireo manana fitaovana toy ny bisikileta.